Cheta na ihe nile kwere omume nye ndi kwere. - Gail Devers - Quotes Pedia
Cheta na ihe nile kwere omume nye ndi kwere. - Ndi Gail Devers
Nkwenye onwe onye nke putara bu itukwasi obi. Ọ dị mkpa inwe okwukwe na onwe gị na ọrụ ị na-arụ, naanị mgbe ahụ ị ga - ebili ka ihe gaziere gị nke ọma. Nkwenye onwe onye bụ isi ihe na - eme ka mmadụ nwee ihe ịga nke ọma. Ozugbo ikwere onwe gị, ị nwere ike hapụ ịtụ ụjọ ọdịda. Ọ bụrụ n’anyị enweghị okwukwe na okwukwe, ịgaghị arụ ọrụ, yabụ, ịgaghị enwe ike zuru oke iji bulite onwe gị.
Ndị na-ekweghị na onwe ha ga-emesịa ghara inwe obi ike maka ịme ihe, ma, yabụ, ha na-eme ka mgbochi ha dị ala. Ndị na-enweghị okwukwe na onwe ha ga-emesịa nwee ùgwù onwe ha, ma ga-eleda onwe ha anya. N'ihi ya, ha agaghị enwe ike ịme ike ha niile ma ga n'ihu.
Onweghị ihe a na-akpọ ‘agaghị ekwe omume’. Ihe niile ịchọrọ bụ ikwere onwe gị, ị ga - ejide n’aka na ị ga - enweta ihe niile ị na - eche! Nnabata onwe gi di nkpa. Ozugbo ị hụrụla uru ị bara, ị ga-enwe okwukwe na onwe gị.
Onye nabatara eziokwu ahụ na ya na-eso n’ụzọ ziri ezi ga-emesịa chọta ụzọ ọ ga-esi ruo ebe ọ na-aga. Na ntụle, ọ bụrụ na ịnwere obi abụọ banyere onwe gị, ị ga-anọ n’ọnọdụ nsogbu ma ị na-aga n’ụzọ ziri ezi ma ọ bụ na ị gaghị aga.
Kwenyere na okwu nkwuputa okwu
Kwere Edemede Na-akpali
Ikwere na Quates Images
Quotes kacha mma n’oge niile
Kwuru okwu siri ike
Cheta okwu Kwuru
Mee ka nrọ gị dị ndụ. Nghọta iji nweta ihe ọ bụla chọrọ okwukwe na nkwenye na onwe gị, ọhụụ, ọrụ siri ike, mkpebi siri ike na ịrara onwe gị nye. - Ndi Gail Devers
Nrọ nwere ike ime ka ị rute ihe ị rụzuru. Onye na-adịghị atụ nrọ agaghị enwe ike iru ebe ọ bụla.…